Hena Ne Yesu Kristo? Yesu Yɛ Onyankopɔn anaa Ɔyɛ Onyankopɔn Ba?
KENKAN WƆ Abbey Abui Acholi Alur American Sign Language Amharic Angolan Sign Language Arabic Argentinean Sign Language Armenian Ateso Attié Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bassa (Cameroon) Bassa (Liberia) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Betsimisaraka (Southern) Bislama Bolivian Sign Language Boulou Bété Cambodian Chavacano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chopi Chuabo Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Damara Dangme Douala Dusun Efik English Estonian Ewe Fante Fijian Fon French Ga Guadeloupean Creole Guarani Guarani (Bolivia) Guianese Creole Gun Guéré Haitian Creole Hausa Herero Hindi Hunsrik Iban Ibinda Igbo Indian Sign Language Irish Javanese Jula Kabuverdianu Kannada Karen (S'gaw) Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Kpelle Krio Kurdish Kurmanji Kwangali Kwanyama Kyangonde Lamba Lhukonzo Lingala Lomwe Luganda Lunda Luo Macua Malagasy Malayalam Maltese Mambwe-Lungu Marathi Mauritian Creole Mazahua Mbunda Meru Moore Myanmar Navajo Ndau Ndebele Ndonga Ngangela Nias Nigerian Pidgin Nyungwe Nzema Okpe Oromo Otetela Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Quechua (Ayacucho) Quichua (Imbabura) Quichua (Santiago del Estero) Rapa Nui Romanian Romany (Eastern Slovakia) Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Northern Greece) Romany (Serbia) Romany (Southern Greece) Runyankore Russian Rutoro Réunion Creole Samoan Sango Sena Sepedi Seychelles Creole Sidama Silozi Sinhala Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swati Tahitian Tajiki Talian Tamil Tandroy Thai Thai Sign Language Tigrinya Tiv Tongan Tshwa Turkish Twi Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Vezo Vietnamese Wallisian Wichi Wolaita Yacouba Zulu
1, 2. (a) Sɛ wote obi a wagye din ho asɛm a, ɛkyerɛ sɛ wunim no yiye? Kyerɛkyerɛ mu. (b) Nkurɔfo ka sɛ Yesu yɛ nipa bɛn?
NKURƆFO a wɔagye din wɔ wiase dɔɔso. Ebia woate wɔn mu bi nka anaa wunim wɔn din. Nanso ɛnkyerɛ sɛ wunim wɔn yiye. Worentumi nka sɛ wunim wɔn su ne wɔn ban.
2 Bɛyɛ mfe 2,000 ni a Yesu Kristo baa asase so. Ebia woate ne ho asɛm sɛnea nnipa pii ate no. Nanso nnipa dodow no ara nnim onipa ko a ɔyɛ. Ebinom ka sɛ ɔyɛ nipa pa, ebi nso se ɔyɛ odiyifo, ɛnna ebinom se ɔyɛ Onyankopɔn. Wo nso ɛ, w’adwene kyerɛ wo sɛn?​—Hwɛ Nsɛm Bi Mu Nkyerɛkyerɛmu 12.
3. Adɛn nti na ehia paa sɛ wuhu Yehowa Nyankopɔn ne Yesu Kristo?
3 Ehia paa sɛ wuhu nipa ko a Yesu yɛ. Dɛn ntia? Bible ka sɛ: “Eyi ne daa nkwa, sɛ wobehu wo, nokware Nyankopɔn koro pɛ no, yiye, ne nea wosomaa no no, Yesu Kristo.” (Yohane 17:3) Enti sɛ wuhu nea Bible ka fa Yehowa ne Yesu ho a, ebetumi ama woatena asase so daa wɔ Paradise. (Yohane 14:6) Afei nso sɛ wuhu Yesu yiye a, ɛbɛboa ma woahu sɛnea wobɛbɔ wo bra ne sɛnea wo ne nnipa bɛtena, efisɛ Yesu atwa sa pa ato hɔ ama yɛn. (Yohane 13:34, 35) Bere a yesuaa nhoma yi Ti 1 no, yehuu Onyankopɔn ho nokwasɛm. Afei yɛrebɛhwɛ nea Bible ka fa Yesu ho.
YƐAHU MESIA NO!
4. Dɛn na edin “Mesia” ne “Kristo” ma yehu?
4 Ansa na wɔrewo Yesu no, na Yehowa aka wɔ Bible mu dedaadaw sɛ ɔbɛsoma Mesia anaa Kristo no aba wiase. “Mesia” yɛ Hebri kasa, ɛnna “Kristo” nso yɛ Hela kasa. Edin mmienu no nyinaa ma yehu sɛ Onyankopɔn beyi Mesia no ama no dibea kɛse. Nea Onyankopɔn ahyɛ bɔ sɛ ɔbɛyɛ no, Mesia no bɛma ne nyinaa aba mu. Ɛnnɛ mpo Yesu betumi aboa wo. Nanso bere a Yesu nnya mmaa asase so no, na nnipa pii redwen ho sɛ, ‘Hena koraa na ɔbɛyɛ Mesia no?’
5. Ná Yesu asuafo no gye di sɛ ɔne Mesia no anaa?
5 Ná Yesu asuafo no gye di paa sɛ ɔno ne Mesia no. (Yohane 1:41) Bere bi, Simon Petro ka kyerɛɛ Yesu sɛ: “Wone Kristo no.” (Mateo 16:16) Yɛn nso yɛbɛyɛ dɛn agye adi sɛ Yesu ne Mesia no?
6. Dɛn na Yehowa yɛ de boaa nnipa a wɔn ani da hɔ na ama wɔahu Mesia no?
6 Wonnya nwoo Yesu koraa no, na Onyankopɔn adiyifo akyerɛw ne ho nsɛm bebree ato hɔ na sɛ ɔba a nnipa ahu sɛ ɔno ne Mesia no. Ná ɛbɛboa wɔn sɛn? Yɛmfa no sɛ worekohyia obi a wunhuu no da wɔ baabi. Sɛ obi kyerɛ wo sɛnea ɔte a, ɛrenyɛ den sɛ wubehu no. Saa ara na Yehowa yɛe; nea Mesia no bɛyɛ ne nea ɛbɛto no nyinaa, Yehowa maa n’adiyifo kyerɛw too hɔ. Sɛ nkɔmhyɛ no nyinaa ba mu a, ɛbɛboa nkurɔfo a wɔn ani da hɔ ma wɔahu sɛ Yesu ne Mesia no.
7. Nkɔmhyɛ mmienu bɛn na ɛma yehu sɛ Yesu ne Mesia no?
7 Ma yɛnhwɛ saa nkɔmhyɛ no mu mmienu. Nea edi kan, mfe 700 ansa na Yesu reba no, odiyifo Mika kae sɛ wɔbɛwo Mesia no wɔ kurow ketewa Betlehem mu. (Mika 5:2) Ɛhɔ ara nso na wɔwoo Yesu! (Mateo 2:1, 3-9) Nea ɛto so mmienu, Daniel hyɛɛ nkɔm sɛ Mesia no beyi ne ti afe 29 Y.B. (Daniel 9:25) Nkɔmhyɛ a ɛkyerɛ sɛ Yesu ne Mesia no dɔɔso; emu mmienu pɛ na yɛaka ho asɛm yi.​—Hwɛ Nsɛm Bi Mu Nkyerɛkyerɛmu 13.
Bere a wɔbɔɔ Yesu asu no, ɔbɛyɛɛ Mesia anaa Kristo
8, 9. Bere a wɔbɔɔ Yesu asu no, dɛn na esii a ɛkyerɛ sɛ ɔno ne Mesia no?
8 Yehowa ama yɛahu pefee sɛ Yesu ne Mesia no. Onyankopɔn ka kyerɛɛ Osuboni Yohane sɛ ɔbɛma wahu sɛnkyerɛnne bi a ɛbɛkyerɛ no Mesia no. Enti bere a Yesu kɔɔ Osuboni Yohane nkyɛn afe 29 Y.B. sɛ ɔmmɔ no asu wɔ Yordan Asubɔnten mu no, Yohane huu saa sɛnkyerɛnne no. Bible ka sɛ: “Ɔbɔɔ Yesu asu wiei no ara pɛ na ofii nsu no mu puei, na hwɛ! ɔsoro buei, na ohuu Onyankopɔn honhom sɛ ɛresian aba no so te sɛ aborɔnoma. Afei hwɛ! Nne bi fi soro kae sɛ: ‘Oyi ne me Ba, nea medɔ no na magye no atom.’” (Mateo 3:16, 17) Bere a Yohane huu sɛnkyerɛnne no na ɔtee nne no, ɛhɔ ara na ohui sɛ Yesu ne Mesia no. (Yohane 1:32-34) Saa da no, Yehowa hwiee honhom kronkron guu Yesu so ma ɔbɛyɛɛ Mesia. Ɔno na Onyankopɔn paw no sɛ Kannifo ne Ɔhene.​—Yesaia 55:4.
9 Nneɛma yi na ɛma yehu sɛ Yesu ne Mesia no: Bible nkɔmhyɛ, Yehowa anom asɛm, ne sɛnkyerɛnne a esii bere a wɔbɔɔ Yesu asu no. Ɛnde, ɛhe na Yesu fi baa asase so, na na ɔyɛ onipa bɛn? Yɛnhwɛ nea Bible aka.
ƐHE NA YESU FI BAA ASASE SO?
10. Sɛnea Bible kyerɛ no, na Yesu wɔ he ansa na ɔreba asase so?
10 Bible ka sɛ Yesu tenaa soro mfe pii ansa na ɔreba asase so. Mika kae sɛ Mesia no ase “fi tete a enni ano.” (Mika 5:2) Yesu kaa no mpɛn pii sɛ na ɔwɔ soro ansa na wɔrewo no aba asase so. (Kenkan Yohane 3:13; 6:38, 62; 17:4, 5.) Enti ansa na Yesu reba asase so no, na ɔne Yehowa atena akyɛ; ná mframa mpo mfa wɔn ntam.
11. Dɛn nti na Yesu da Yehowa koma so saa?
11 Yesu da Yehowa koma so paa. Dɛn ntia? Efisɛ Onyankopɔn dii kan bɔɔ no ansa na ɔrebɔ biribi foforo biara. Ɛno nti, Bible frɛ Yesu “abɔde nyinaa mu abakan.” * (Kolosefo 1:15) Ade foforo nti a Yehowa nni Yesu ho agorɔ ne sɛ, Yesu deɛ, Yehowa nko ara na ɔbɔɔ no. Ɛno nti, Bible frɛ Yesu Onyankopɔn “Ba a ɔwoo no koro.” (Yohane 3:16) Bio nso bere a Yehowa rebɔ nneɛma a aka no, Yesu nko ara na na ɔka ne ho. (Kolosefo 1:16) Yesu nko ara na yɛfrɛ no “Asɛm no,” efisɛ ɔno na Yehowa de nsɛm ne akwankyerɛ fa no so ma abɔfo ne nnipa.​—Yohane 1:14.
12. Yɛyɛ dɛn hu sɛ ɛsono Yesu ɛnna ɛsono Onyankopɔn?
12 Ebinom bu Yesu sɛ ɔno ara ne Onyankopɔn. Nanso ɛnyɛ saa na Bible no ka. Bible ka sɛ Onyankopɔn na ɔbɔɔ Yesu. Ɛno kyerɛ sɛ Yesu wɔ mfiase. Nanso Yehowa na ɔbɔɔ nneɛma nyinaa, na onni mfiase. (Dwom 90:2) Yesu yɛ Onyankopɔn Ba, na amma ne tirim da sɛ ɔbɛyɛ ne ho sɛ Onyankopɔn. Bible ka no pefee sɛ Agya no yɛ kɛse sen Ɔba no. (Kenkan Yohane 14:28; 1 Korintofo 11:3.) Yehowa nko ara ne “ade nyinaa so Tumfoɔ Nyankopɔn.” (Genesis 17:1) Ɔsoro oo, asase so oo, obiara nni tumi sɛ ɔno.​—Hwɛ Nsɛm Bi Mu Nkyerɛkyerɛmu 14.
13. Dɛn nti na Bible ka sɛ Yesu yɛ “Onyankopɔn a wonhu no no suban”?
13 Ansa na Yehowa rebɔ ɔsoro ne asase no, na ɔne ne Ba Yesu abom ayɛ adwuma mfe mpempem huhaa. Enti sɛnea na wɔdɔ wɔn ho no deɛ, ɛnyɛ bi ni! (Yohane 3:35; 14:31) Yesu suasuaa ne papa ara ma Bible ka sɛ ɔyɛ “Onyankopɔn a wonhu no no suban.”—Kolosefo 1:15.
14. Ɛyɛɛ dɛn na Yehowa Ba a ɔda ne koma so no bɛyɛɛ onipa?
14 Yehowa Ba a ɔda ne koma so yi penee so fii soro baa asase so bɛyɛɛ onipa. Ɛyɛɛ dɛn na etumi yɛɛ yiye saa? Yehowa faa anwonwakwan so de ne Ba no nkwa bɛhyɛɛ ɔbaabun bi a wɔfrɛ no Maria yam wɔ asase so. Eyi kyerɛ sɛ Yesu deɛ, na n’agya nyɛ onipa desani. Maria woo ɔbabarima a bɔne biara nni ne ho, na ɔtoo ne din Yesu.—Luka 1:30-35.
NÁ YESU YƐ NIPA BƐN?
15. Dɛn na woyɛ a ɛbɛma woahu Yehowa yiye?
15 Wopɛ sɛ wusua Yesu ho ade pii na wuhu n’asetena ne sɛnea ɔte paa a, kenkan Bible nhoma a wɔato din Mateo, Marko, Luka ne Yohane. Wɔfrɛ saa nhoma yi Nsɛmpa. Sɛ wokenkan saa nhoma no a, ɛbɛma woahu Yehowa nso yiye, efisɛ Yesu te sɛ n’Agya pɛpɛɛpɛ. Ɛno nti na Yesu tumi kae sɛ: “Nea wahu me no ahu Agya no nso.”​—Yohane 14:9.
16. Dɛn na Yesu kaa ho asɛm paa? Yesu nyaa ne nkyerɛkyerɛ no fii he?
16 Nnipa pii frɛɛ Yesu “Ɔkyerɛkyerɛfo.” (Yohane 1:38; 13:13) Adeɛ baako a Yesu kaa ho asɛm paa ne “Ahenni no.” Dɛn ne saa Ahenni yi? Ɛyɛ Onyankopɔn aban a ɛwɔ soro, na ebedi asase nyinaa so ama nnipa a wotie Onyankopɔn anya nhyira. (Mateo 4:23) Biribiara a Yesu kyerɛkyerɛe no fi Yehowa hɔ. Yesu no ara kae sɛ: “Nea mekyerɛkyerɛ no nyɛ me dea, na mmom nea ɔsomaa me no dea.” (Yohane 7:16) Ná Yesu nim sɛ Yehowa pɛ sɛ nkurɔfo te asɛmpa a ɛne sɛ Onyankopɔn Ahenni bedi asase nyinaa so no.
17. Ɛhe na Yesu kyerɛkyerɛɛ nkurɔfo? Dɛn nti na ɔyeree ne ho kyerɛkyerɛɛ nkurɔfo saa?
17 Ɛhe na Yesu kyerɛkyerɛɛ nkurɔfo? Baabiara a obenya nnipa; nkuraase, nkurow akɛse mu, gua so, hyiadan mu, ne afie mu. Wantena hɔ sɛ nkurɔfo mmra ne nkyɛn. Ɔno mmom na na ɔkɔ wɔn nkyɛn. (Marko 6:56; Luka 19:5, 6) Yesu yeree ne ho de ne bere ne n’ahoɔden kyerɛkyerɛɛ nkurɔfo. Dɛn ntia? Na onim sɛ saa na Onyankopɔn pɛ sɛ ɔyɛ. Afei nso na ɔpɛ sɛ ɔyɛ osetie ma n’Agya. (Yohane 8:28, 29) Ade baako nso a ɛkaa Yesu ma ɔkyerɛkyerɛɛ nkurɔfo ne sɛ na nnipa yɛ no mmɔbɔ. (Kenkan Mateo 9:35, 36.) Yesu huu sɛ na nyamesom mpanyimfo no nka nokware a ɛfa Onyankopɔn ne n’Ahenni no ho nkyerɛ nkurɔfo. Eyi nti, na ɔpɛ sɛ ɔboa nnipa pii ma wɔte asɛmpa no.
18. Yesu suban bɛn na w’ani gye ho paa?
18 Yesu baa asase so no, ɔkyerɛɛ sɛ ɔdɔ nnipa na odwen wɔn ho. Ná ne tirim nyɛ den, na na obiara tumi bɛn no. Ná mmofra mpo tumi ka kɔ ne ho. (Marko 10:13-16) Ná Yesu mpɛ nsisi; ná okyi nyansakorɔn ne animtiaabu. (Mateo 21:12, 13) Yesu bere so no, na nkurɔfo ka mmea hyɛ, na na wɔmfa wɔn nyɛ hwee. Nanso Yesu de, na obu mmea na bere nyinaa na odi wɔn ni. (Yohane 4:9, 27) Sɛ yɛka ahobrɛase nso a, na Yesu wɔ bi paa. Anwummere bi a na ɔne n’asuafo ahyia no, ɔfaa nsu hohoroo wɔn nan ho. Saa bere no, na nkoa na ɛyɛ saa adwuma no.​—Yohane 13:2-5, 12-17.
Baabiara a Yesu benya nnipa no, na ɔka asɛm no kyerɛ wɔn
19. Asɛm bɛn na esii a ɛma yehu sɛ na Yesu nim nea nkurɔfo hia na oyii ne yam boaa wɔn?
19 Ná Yesu nim nea nkurɔfo hia, na oyii ne yam boaa wɔn. Sɛnea ɔde Onyankopɔn tumi saa nkurɔfo yare no ma yehu pefee sɛ na odwen nnipa ho. (Mateo 14:14) Bere bi, ɔkwatani bi bɛka kyerɛɛ Yesu sɛ: “Sɛ wopɛ nko ara a, wubetumi ama me ho afi.” Ná ɔbarima no rebrɛ paa; n’asɛm yɛɛ Yesu mmɔbɔ, enti na ɔpɛ sɛ ɔboa no. Yesu teɛɛ ne nsa soo ne mu kae sɛ: “Mepɛ. Wo ho mfi.” Amonom hɔ ara na ɔbarima no ho tɔɔ no; kwata no tu yerae! (Marko 1:40-42) Wohwɛ a, ɔbarima no bɛte nka sɛn?
ƆYƐƐ N’AGYA APƐDE BERE NYINAA
20, 21. Dɛn na ɛma yehu sɛ ɛba osetie a, Yesu na odi kan?
20 Yɛreka obi a otie Onyankopɔn paa a, ɛyɛ Yesu. Sɛ dɛn na ɔrefa mu oo, sɛ dɛn na n’atamfo reyɛ no oo, n’Agya apɛde ara na ɔyɛe. Enti bere a Satan sɔɔ Yesu hwɛe no, Yesu anto Onyankopɔn mmara. (Mateo 4:1-11) Ɔno ara n’abusuafo bi annye anni sɛ ɔne Mesia no. Wɔkaa mpo sɛ “n’adwene asɛe.” Nanso Yesu amfa n’adwene ansi nea na wɔrekeka no so; ɔkɔɔ so yɛɛ Onyankopɔn adwuma. (Marko 3:21) Bere a Yesu atamfo nso yɛɛ no aninyanne no, wanyɛ wɔn bi antua ka; nea Onyankopɔn pɛ nko ara na ɔyɛe.​—1 Petro 2:21-23.
21 Bere a wɔrekum Yesu yayaayaw mpo, ɔyɛɛ osetie maa Yehowa. (Kenkan Filipifo 2:8.) Wo deɛ hwɛ yaw ne abɛbrɛsɛ a ɔfaa mu ansa na ɔrewu! Wɔkyeree no maa adansekurumfo twaa atoro too no so sɛ waka abususɛm, aturuturafo dwoodwoo no, na wobuu no ntɛnkyea maa asraafo yɛɛ no ayayade ma wɔbɔɔ no asɛndua mu. Enti ɔrewu no, ɔteɛɛm sɛ: “Asa!” (Yohane 19:30) Yesu wui no, ne nnansa so na Yehowa nyanee no maa no honhom nipadua. (1 Petro 3:18) Ankyɛ na Yesu san kɔɔ soro; “ɔkɔtenaa Onyankopɔn nsa nifa” twɛnee sɛ obesi no Hene.​—Hebrifo 10:12, 13.
22. Osetie a Yesu yɛ maa n’Agya nti, anidaso bɛn na yɛanya?
22 Osetie a Yesu yɛ maa n’Agya nti, ɛnnɛ yɛwɔ anidaso sɛ yɛbɛtena asase so daa wɔ Paradise sɛnea Yehowa pɛ sɛ ɛyɛ no. Yɛbɛka Yesu wu no ho asɛm wɔ ti a edi hɔ no mu, na yebehu sɛ ne wu no ma yenya anidaso sɛ yɛbɛtena ase daa.
^ nky. 11 Nea enti a Bible frɛ Yehowa Agya ne sɛ ɔno ne Ɔbɔadeɛ. (Yesaia 64:8) Yesu nso Bible frɛ no Onyankopɔn Ba, efisɛ Yehowa na ɔbɔɔ no. Abɔfo no ne Adam nyinaa, Bible frɛ wɔn Onyankopɔn mma.​—Hiob 1:6; Luka 3:38.
NOKWASƐM 1: YESU NE MESIA NO
“Wone Kristo no.”​—Mateo 16:16
Dɛn na ɛma yehu sɛ Yesu ne Mesia no?
Yehowa maa nnipa hui sɛ ne Ba ne Yesu.
Nkɔmhyɛ a ɛfa Mesia ho no, ne nyinaa baa mu wɔ Yesu so.
NOKWASƐM 2: ANSA NA YESU REBA ASASE SO NO NA ƆYƐ ƆBƆFO
“Mifi soro aba.”​—Yohane 6:38
Dɛn na Yesu yɛe wɔ soro ansa na ɔreba asase so?
Kolosefo 1:15, 16
Yehowa nkutoo na ɔbɔɔ Yesu. Nneɛma a aka no deɛ, Yehowa rebɔ no, na Yesu ka ne ho. Yesu tenaa n’Agya nkyɛn mfe mpempem huhaa. Agya no kyerɛkyerɛɛ no.
Yehowa somaa Yesu baa asase so.
NOKWASƐM 3: YESU DƆ NNIPA
“Momma mmofra nkumaa no mmra me nkyɛn.”​—Marko 10:14
Yesu suban bɛn na w’ani gye ho paa?
Ná Yesu tirim nyɛ den na na obiara tumi bɛn no.
Ná Yesu wɔ obu ma mmea na na odi wɔn ni bere nyinaa.
Ná Yesu brɛ ne ho ase.
Yesu yii ne yam boaa nkurɔfo.
NOKWASƐM 4: YESU YƐ ONYANKOPƆN APƐDE BERE NYINAA
“Mawie adwuma a wode ama me sɛ menyɛ no.”​—Yohane 17:4
Osetie a Yesu yɛe no, dɛn na yebetumi asua afi mu?
Bere a Ɔbonsam sɔɔ Yesu hwɛe no, Yesu anto Onyankopɔn mmara.
Yesu abusuafo bi buu no animtiaa, nanso ɔyɛɛ osetie maa Onyankopɔn kosii awiei.
Yesu anyɛ n’atamfo bɔne.
Bere a wɔrekum Yesu yayaayaw mpo, ɔyɛɛ osetie maa Onyankopɔn.
Hebrifo 10:12, 13; 1 Petro 3:18
Yehowa nyanee Yesu kɔɔ soro.